स्वास्थ्य/विशेष Archives -
December 13, 2018 Spnews 0
चुरोट र रक्सी पिउनु नेपाली समाजमा पनि सामान्य जस्तै बनिसकेको छ । किशोर किशोरी देखी बुढापाका सम्मले चुरोट र रक्सी पिएको देख्न सकिन्छ । जब चुरोट वा रक्सीको बानी पर्छ, मानिसहरु त्यो लतलाई त्याग्न चाहन्छन, […]
पिँडालु खानुका फाईदा जानी राखौँ, सबैले पढी १/१ शेयर गरौ !
December 12, 2018 Spnews 0
सामान्यतया तरकारीलाई हामीले स्वाद अनुसार रोज्ने गर्छौं । तर तरकारी रोज्दा पौष्टिकताको आधारमा पनि रोज्नु आवश्यक हुन्छ । स्वादको दृष्टिकोणले हेर्दा धेरैलाई पिडालु मन पर्दैन । तर यसमा भने धेरै पौष्टिकता लुकेको हुन्छ । पिडालुमा […]
योग गर्नु शारीरिक तन्दुरुस्ती र निरोगी जीवनको सर्वोत्तम उपाय हो । यद्यपी योग गर्दा त्यसको विधी र प्रभावबारे प्रष्ट हुनुपर्छ । अन्धधुन्ध योग गर्दा अपेक्षित नतिजा हासिल नहुने मात्र होइन, उल्टो असर गर्न सक्छ । […]
दाँतको दुखाइबाट जोगिने उपायहरु, पढ्नुहोस
December 11, 2018 Spnews 0
दाँतको सहि संभार नहँुदा यसमा लाग्ने रोगले दुखाइ निम्त्याउँछ जुन सहन निकै गाह्रो हुन्छ दाँत दुखाइबाट बच्ने केहि उपायहरु – निमपत्ताःनिमको पातमा व्याक्टेरियाबिरुद्ध लड्ने गुणसमेत हुने भएकाले निमपत्ता दुखाई कम गर्ने प्रभावकारी घरेलु उपाय हो। […]
जानिराखौ, मृगौला रोग, मृगौला फेल हुने कारण र लक्षणहरू
December 9, 2018 Spnews 0
हाम्रो शरीरमा भएका दुई मृगौलाको काम भनेको शरीरमा भएका हानिकारक विषालु पदार्थहरूलाई छानेर पिसाबको मार्फत बाहिर फाल्नु हो। तर यदि मृगौलामा कुनै पनि समस्या आउन थाल्यो भने यसले राम्ररी आफ्नो काम गर्न सक्दैन, जसको कारण […]
जाडोमा चायाँ पर्नुको कारण र बच्ने उपाय
December 4, 2018 Spnews 0
एजेन्सी टाउकोमा छालाका कोष मर्ने र नयाँ पलाउने क्रम निरन्तर चलिरहन्छ । यस्तो वेला टाउकोमा सेता, मसिना फुस्रा दागहरू देखिन्छन्, जसलाई हामी चायाँ भन्छौँ । चायाँ पर्ने कारण सरसफाइ पनि चायाँको कारक हो । सरसफाइमा […]
December 1, 2018 Spnews 0
एजेन्सी । हाम्रो समाजमा हरेकका घर घरमा तुलसीको मठ र बिरुवा हुने गर्दछ । तर के तपाईलाई थाहा छ तमाम गुणले भरिएको तुलसीको बिरुवा कुन दिशामा हुनुपर्दछ ? सहि दिशामा तुलसी रोप्नाले यसले शुभ फल […]
कागती पानीले दिनको सुरुवात गर्नुका सात फाइदा पद्नुहोस
November 29, 2018 Spnews 0
केही सामान्य परिवर्तनले तपाईंको स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर पुर्याउन सक्छ । जीवनशैलीमा साधारण बदलावले पनि तपाईंलाई स्वस्थ्य र दिनभरी ऊर्जावान् रहन पनि मद्दत गर्नसक्छ । आफ्नो दिनलाई एक गिलास कागती पानीले सुरु गर्न निकै सजिलो छ […]
मधुमेह, कब्जियत, टाउको दुखेको, खोकीको लागि अचुक ओखती: पानको पात !
November 25, 2018 Spnews 0
पानको पात भन्ने शब्द जति माया लाग्दो छ त्यति नै बहु उपयोगी पनि छ । पानको पात भन्नासाथ ‘माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात’ भन्ने गीतको याद पनि आइहाल्छ । पानको पात खाँदा मुख्यतया मधुमेह, कब्जियत, […]
आफ्नो शरीरमा क्यान्सर भए/नभएको आफै पत्ता लगाउने यी हुन् ७ तरिकाहरु
November 24, 2018 Spnews 0
नेपालमा ८० प्रतिशत क्यान्सरका बिरामी अन्तिम अवस्थामा मात्रै अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । समयमै चिकित्सकलाई आफ्नो समस्याबारे नबताउँदा क्याम्सरको उपचार जटिल बन्ने गरेको छ । चाँडो अस्पताल नजाने हाम्रो बानी नै छ । त्यसैले आफैले […]